Maxaa Gooni u ahaa Fadhigii Barlamanka DDS ee shalay??. | ogaden24
Maxaa Gooni u ahaa Fadhigii Barlamanka DDS ee shalay??.
Waxaa gooni u ahaa arimahan hoos ku xusan;
1. Waa markii koobaad ee ay xubnaha baarlamaanku ka doodaan ajandayaasha lasoo hordhigay kuna qanciyaan shir gudoonka (afhayeenka iyo afhayeen kuxigeenka) in dib loogu dhigo ajandayaasha shirka wakhti ay kusoo akhriyaana lasiiyo sidaasna lagu ansixiyo qayb kamida ajandayaashii shirka. Waa talaabo wanaagsan oo horay looqaaday ee sidaas haku sii socdaan.
2. Waa markii koobaad ee tiro intaas dhan (13) oo kamida golaha xildhibaanada hal mar xasaanada laga qaado waana liis ka yimid xafiiska xeer ilaalinta heer fadaraal. Waa natiijadii kadhalatay sunaamidii deegaanka kadhacday 4tii August 2018.
3. Waa markii koobaad ee xubin xildhibaan ah si khalad ah ama kama’ ah xasaanada looga qaado. Arintan ayaa dhacday kadib markii ay xeer ilaalinta heer fadaraal liiskii eedaysanayaasha uu soo gudbiyay kusoo daray hal magac oo uuna lasoconin magicii aabaha iyo kii awawgu.
Magacaas oo ay kamidaysnaayeen 3 xubnood oo kamida golaha xildhibaanada ayuu muran badani kayimid midkoodii laga qaadilahaa xasaanada waxaana si bakhtiyaa nasiib ah loogu go’aamiyay 3dii isku magaca ahayd midkood sidaasna xasaanadii lagaga xayuubiyay.
Biririftii shaaha markii loobaxay tooyasho na loola xidhiidhay xeer ilaalintii heer fadaraal waxaa cadaatay xubinka la rabay inuuna ahayn xubinkii laga qaaday xasaanada shirkii markii lagu laabtayna markale dib loogu codeeyay xasaanad kaqaadida xubinkii kale walow xubinkii lagu khaldamay aan loosoo celinin xasaanadiisii.
4. Waa markii koobaad ee xubnaha xildhibaanada loo qaybiyo warbixintii waxqabadka xukuumada oo af-ingiriis kuqoran (warbixinada intooda badan), taasoo keentay inay xildhibaanadu iswaydiiyaan in warbixintan af-ingiriis ka kuqoran iyaga loogu talagalay iyo inay tahay mid soo khaldantay oo ku socotay hay’adihii deeq bixiyayaasha ahaa. Bilow la tijaabinayay heer kooda aqooneed iyo fahankooda dhanka luqadaha kale een soomaaliga ahayn.
5. Waa markii koobaad ee ajanda ay xukuumadu soo gudbisatay in lagudaro ajandayaasha shirka kalafadhiga golaha xildhibaanada ay kadiidaan gudiyada joogtada ah ee golaha xildhibaanadu sidaasna dib loogu dhigo. Ajandahaas oo ahaa liis ay ku qornaayeen xubno kamida xildhibaanada oo uu xafiiska xeer ilaalinta DDS du dambiyo kusoo eedeeyay unasoo gudbiyay liiskooda gudiyada joogtada ah 1-3 maalmood kahor kalafadhiga 8aad si loogu daro liiska xildhibaanada xasaanad laga qaadayo ayay gudigu kadiideen una sheegeen inay ubaahan yihiin wakhti kufilan oo ay ku xaqiijiyaan eedaymaha iyo cadaymaha ay uhayaan xeer ilaalintu sidaasna dib loogu dhigay xasaanad ka qaadidoodii ilaa kalafadhi dambe. Arintan ayaa ku raja galinaysa kuna tusaysa in la bilaabay ku dhaqankii sharciga iyo madax banaanida golaha xildhibaanada oon hada kahor waxba diidi jirin ama aan diidi karin.
6. Waa markii koobaad ee tiro intaas le’eg oo warbaahin ah soo xaadirto kalafadhiga golaha wakiilada shacabka DDS oo ay tabiyaan/baahiyaan dhacdooyinka ugu muhiimsan kalafadhiga. Ugu yaraan 10 warbaahinoodoo oo isugu jira TV yo, idaacado/radio, Jaraa’idyo iyo website yo ayaa sooxaadiray waxna ka qorayay kalafadhiga 8aad. Ka qaybgalka warbaahintu waa mihiim waana astaamaha cadcadaanta iyo dimuqraadiyada ee hala sii xoojiyo.
Intaas ha inoogu joogto maanta oo ahayd maalintii 1aad ee kala fadhigu furmay.
SDM Jigjiga DDS